Uhlu lwama-insulins: Ukusetshenziswa, izinhlobo ezivamile, nolwazi lokuphepha - Imininingwane Yezidakamizwa | Julayi 2021
Izidakamizwa Vs. Umngani Umphakathi Ukuphila Kahle Umphakathi, Inkampani Imfundo Yezempilo, Izilwane Ezifuywayo Izilwane Ezifuywayo Imfundo Yezempilo, Ukuphila Kahle Inkampani Inkampani, Imfundo Yezempilo Imininingwane Yezidakamizwa, Izindaba Ukuphuma Imfundo Yezempilo Inkampani, Izindaba Umphakathi, Ukuphila Kahle Inkampani, The Checkout
Main >> Imininingwane Yezidakamizwa >> Yini i-insulin? Imikhiqizo ejwayelekile nokuthi isebenza kanjani
Yini i-insulin? Imikhiqizo ejwayelekile nokuthi isebenza kanjani
Uhlu lwe-insulin | Yini i-insulin? | Isebenza kanjani | Isebenzisa | Izinhlobo | Ngubani ongathatha i-insulin? | Ukuphepha | Okuqhamuka uma udla imishanguzo | Izindleko
I-insulin yihomoni eyenzeka ngokwemvelo esiza umzimba ukulawula amazinga kashukela egazini futhi inikeze amaseli amandla. Isifo sikashukela, esaziwa kakhulu njengesifo sikashukela, yisimo lapho i-bikhono le-ody lokukhiqiza noma lokuphendula i-hormone insulin alisebenzi kahle, okuholela kushukela ophakeme wegazi. Kubantu abanesifo sikashukela sohlobo 1, amanyikwe awasenzi i-insulin ne-insulin shots kuyadingeka ukusebenzisa ushukela ekudleni. Labo abanesifo sikashukela soHlobo 2 basengayenza i-insulin, kodwa kungenzeka ingabi ngamanani anele noma imizimba yabo ingaphenduli kahle kwi-insulin etholakalayo (eyaziwa ngokuthi ukumelana ne-insulin). Mayelana 30% yabantu abanesifo sikashukela soHlobo 2 nabo badinga imijovo ye-insulin.
Leli thebula libala ama-insulins asetshenziswa kakhulu alandelwa imininingwane yokuthi asebenza kanjani, aphatha ziphi izimo, ukuphepha nezindleko.
indlela esheshayo yokususa ukhunta lwe-nail
OKUSHIWO: Thayipha 1 vs. Uhlobo 2 sikashukela
Igama lomuthi Intengo yemali emaphakathi Intengo ye-SingleCare Funda kabanzi
I-Humalog (i-insulin lispro) $ 316.22 ngesitsha ngasinye Thola amakhuphoni we-Humalog I-Humalog vs. Novolog
I-Novolog (i-insulin aspart) $ 384 nge-1, 10 mL ye-100 unit / mL vial Thola amakhuphoni we-Novolog Imininingwane ka-Novolog
I-Apidra (i-insulin glulisine) $ 325 nge-1, 10 mL ye-100 unit / mL vial Thola amakhuphoni e-Apidra Imininingwane ye-Apidra
I-Humulin R (i-insulin ejwayelekile) $ 698 per 6, 3 mL of 500 unit / mL pens Thola amakhuphoni we-Humulin R Imininingwane ka-Humulin R
I-Novolin R (i-insulin ejwayelekile) $ 220 nge-1, 10 mL ye-100 unit / mL vial Thola amakhuphoni kaNovolin R Imininingwane kaNovolin R.
I-Humulin N (i-NPH insulin) $ 123 ngepeni ngalinye Thola amakhuphoni we-Humulin N Imininingwane ka-Humulin N.
I-Novolin N (i-NPH insulin) $ 231 nge-1, 10 mL ye-100 unit / mL vial Thola amakhuphoni kaNovolin N Imininingwane kaNovolin N.
I-Lantus (i-insulin glargine) $ 452 nge-1, 10 mL ye-100 unit / mL vial Thola amakhuphoni e-Lantus Imininingwane kaLantus
I-Basaglar (i-insulin glargine) $ 95 per 3, 3 mL of 100 unit / mL pen Thola amakhuphoni we-Basaglar KwikPen Imininingwane ye-Basaglar KwikPen
I-Levemir (insulini detemir) $ 490 nge-1, 10 mL ye-100 unit / mL vial Thola amakhuphoni weLevemir Imininingwane kaLevemir
I-Tresiba (i-insulin degludec) $ 506 nge-1, 10 mL ye-100 unit / mL vial Thola amakhuphoni kaTresiba Imininingwane kaTresiba
I-Toujeo (i-insulin glargine egxilile) $ 180 per 1, 1.5 mL of 300 unit / mL Ipeni leSolostar Thola amakhuphoni weToujeo Solostar Imininingwane kaToujeo Solostar
I-Admelog (i-insulin lispro)
I-Fiasp (i-insulin aspart)
I-insulini lispro protamine
I-Lyumjev (i-insulin lispro)
I-Myxredlin (i-insulin ejwayelekile)
I-Semglee (i-insulin glargine)
I-Soliqua (Insulin Glargine-lixisenatide)
I-Xultophy (i-insulin degludec-liraglutide)
Ama-insulins asengaphambi kwesikhathi
I-Humalog Mix 50/50 - 50% NPH, 50% Humalog (lispro)
I-Humalog Mix 75/25 - 75% NPH, 25% Humalog (lispro)
I-Novolog Mix 70/30 - 70% NPH, 30% Novolog (aspart)
I-Humulin 50/50 - 50% NPH, 50% ejwayelekile
I-Humulin 70/30 - 70% NPH, i-30% ejwayelekile
UNovolin 70/30 - 70% NPH, 30% ejwayelekile
I-powder yokuphefumula esebenza ngokushesha
I-Afrezza inhalation powder (i-insulin yomuntu)
I-insulin yihomoni yemvelo efihliwe ngamaseli akhethekile, abizwa ngama-beta cells, atholakala kumanyikwe. I-insulin ilawula imisebenzi eminingi emzimbeni enikeza amaseli ngeamandla abawadingayo ukuze baphile futhi bakhule. Kubantu abangenaso isifo sikashukela, ukukhiqizwa kwe-insulin nokukhululwa kuyinkqubo eyinkimbinkimbi kakhulu, evumela umzimba ukuthi ugcine ngokucophelela amazinga kashukela wegazi ukuhlangabezana nezidingo zawo.
Kusukela ngama-1920s, lapho abacwaningi bethola futhi behlukanisa i-insulin, isayensi yezokwelapha yenze amagxathu amakhulu ekwakheni imikhiqizo emisha yokwelashwa kwe-insulin evumela abantu abanesifo sikashukela abancike ku-insulin ukuthi balawule ngokujwayelekile okujwayelekile kumashukela abo egazi.
Isebenza kanjani i-insulin?
Ngokushesha ngemuva kokudla, ukudla okudliwayo, ikakhulukazi ama-carbohydrate , ihlehla ngokushesha ibe uhlobo oluthile lukashukela olubizwa ngokuthi i-glucose olumunceke egazini. Lokhu kukhuphuka okusheshayo kukashukela egazini kubangela ukuthi i-insulin ikhishwe emanyanyeni. I-insulin ivumela amangqamuzana emzimbeni, njengamaseli emisipha, ukuthi amunce i-glucose ukuze ayisebenzise njengomthombo wamandla. I-insulin ineminye imiphumela, kepha ikakhulukazi ilawula ukuthi umzimba uyisebenzisa kanjani i-glucose.
Kubantu abanesifo sikashukela, uma umzimba ungakhiqizi i-insulin eyanele noma ungayisebenzisi kahle, amazinga eglucose egazi ayanda futhi amaseli ahamba ngaphandle kwe-glucose adinga ukusebenza kahle. Uma amazinga eglucose egazi ehlala ephezulu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, izwe elaziwa njenge-hyperglycemia, lokhu kungakhuphula ubungozi besifo senhliziyo, isifo sohlangothi nezinye izinkinga zempilo.
Ukunqoba izinkinga ezihambisana namazinga aphezulu eglucose, abantu abanesifo sikashukela soHlobo 1 badinga i-insulin ngomjovo noma ngokusebenzisa ipompo ye-insulin. Labo abanesifo sikashukela soHlobo 2 bangaphendula ekushintsheni kwendlela yokuphila ukunciphisa amazinga aphezulu kashukela egazini, njengokudla nokuvivinya umzimba, noma bangadinga amaphilisi, i-insulin, noma inhlanganisela yemithi.
OKUSHIWO: Yini amazinga ejwayelekile eglucose yegazi?
Ngabe ama-insulins asetshenziselwa ini?
Thayipha 2 sikashukela
Isifo sikashukela sokukhulelwa (abesifazane abahlakulela isifo sikashukela ngesikhathi sokukhulelwa)
Ama-insulins asebenza ngokushesha
Ama-insulins asebenza ngokushesha angama-insulin analogue noma izinhlobo eziguqulwe kancane ze-insulin yomuntu, ezisebenza ngokushesha nangokulindelekile. Baqala ukusebenza cishe imizuzu eyi-15 ngemuva kokujova, beqonge cishe ihora elilodwa kuya kwamabili, futhi bagcina phakathi kwamahora amabili kuya kwamane. Ama-insulins asebenza ngokushesha ahlanganisa ukudla okudliwe ngasikhathi sinye nomjovo futhi kuvame ukusetshenziswa nge-insulin esebenza isikhathi eside. Lawa ma-insulins yilawa ma-insulins avame kakhulu asetshenziswa kumaphampu e-insulin (ithuluzi elincane langaphandle elihambisa i-insulin ngepayipi elincanyana elibekwe ngaphansi kwesikhumba).
Amagama omkhiqizo ajwayelekile kuleli klasi:
I-Humalog ne-Admelog (i-insulin lispro)
I-Novolog ne-Fiasp (i-insulin aspart)
I-Apidra (i-insulin glulisine)
Ama-insulins asebenza okwesikhashana
Ama-insulins asebenza okwesikhashana (abizwa nangokuthi ama-insulins ajwayelekile) afinyelela egazini kungakapheli imizuzu engama-30 ngemuva kokujova, ukuphakama phakathi kwamahora amabili kuya kwamathathu, futhi kugcine cishe amahora amathathu kuya kwayisithupha. Lawa ma-insulins amboza ukudla okudliwe kungakapheli imizuzu engama-30 kuye kwangama-60 futhi kuvame ukusetshenziswa nge-insulin esebenza isikhathi eside.
I-Humulin R, i-Novolin R, ne-ReliOn / i-Novolin R (i-insulin ejwayelekile yomuntu)
IVelosulin BR (i-insulin evamile ebhuqiwe ukuze isetshenziswe empompa ye-insulin)
Ama-insulins asebenza phakathi
Ama-insulins asebenza phakathi nendawo afinyelela egazini cishe emahoreni amabili kuya kwamane ngemuva kokujova, aphakeme amahora amane kuya kwayi-12 kamuva, futhi ahlala cishe amahora ayi-12 kuye kwayi-18. Lezi zimbozo ze-insulin zidinga cishe isigamu sosuku noma ubusuku bonke. Zivame ukusetshenziselwa i-insulin esheshayo noma esebenza okwesikhashana.
kukhona okujwayelekile kokhilimu we-estrace
I-Humulin N, i-Novolin N, ne-ReliOn / i-Novolin N (i-NPH yabantu i-insulin)
Ama-insulins asebenza isikhathi eside
Ama-insulins asebenza isikhathi eside, abizwa nangokuthi ama-basal noma ama-insulins wangemuva, awanakho ukuphakama njengama-insulins asebenza amafushane. Ngokuvamile zifinyelela ekuhambeni kwegazi emahoreni ambalwa ngemuva kokujova futhi zisebenzela ukwehlisa amazinga kashukela kuze kube ngamahora angama-24. Lokhu kuvame ukuhlanganiswa ne-insulin esheshayo noma esebenza okwesikhashana.
ILantus neBasaglar (i-insulin glargine)
I-Levemir (insulini detemir)
I-Tresiba (i-insulin degludec)
I-Humulin R U-500 (i-insulin ejwayelekile egxilile yomuntu)
I-insulin esebenza isikhathi eside
I-insulin esebenza isikhathi eside ifinyelela egazini cishe emahoreni ayisithupha, ayiqedi, futhi ihlala amahora angama-36 noma ngaphezulu.
Igama lomkhiqizo elijwayelekile kuleli klasi:
I-Toujeo U-300 (i-insulin glargine egxilile)
Ama-insulins asengaphambi kokuhlanganiswa ahlanganisa izinhlobo ezimbili ezihlukene ze-insulin, i-insulin esheshayo noma esebenza okwesikhashana ene-insulin esezingeni eliphakathi, ukuhlinzeka ngesembozo sesikhathi sokudla kanye nokufakwa isikhathi eside osukwini. Lezi zivame ukuthathwa kabili noma kathathu ngosuku ngaphambi kwesikhathi sokudla. Inombolo yokuqala egameni itshela iphesenti le-insulin esebenza phakathi, inombolo yesibili iphesenti le-insulin esheshayo noma esebenza okwesikhashana (isb., I-Novolog Mix 70/30 iqukethe i-70% NPH kanye ne-30% insulin aspart).
INovolin 70/30 - 70% NPH, 30% ejwayelekile
Ukusebenza ngokushesha okuhogela i-insulin kuphakama egazini cishe emizuzwini eyi-15 kuye kwengama-20 futhi kuhlala cishe amahora amabili kuya kwamathathu. Kumele isetshenziswe kanye ne-insulin esebenza isikhathi eside kubantu abane-Type 1 diabetes.
Ubani ongathatha ama-insulins?
Abantu abane-Type 1 diabetes
Bonke labo abanesifo sikashukela soHlobo 1, noma ngabe baneminyaka emingaki, kumele bathathe i-insulin. Amaseli we-beta kumanyikwe awasayenzi i-insulin futhi ukuze aphathe amazinga eglucose egazini, i-insulin kufanele ijojowe noma ifakwe iphampu ye-insulin.
Abantu abane-Type 2 diabetes
Uhlobo lwesibili sikashukela ngokuvamile luyisifo esiqhubekayo futhi iningi alidingi i-insulin lapho litholakala kuqala. Amazinga eglucose egazi avame ukulawulwa ngokushintshwa kwendlela yokuphila njengokuhlela ukudla ngokucophelela nokuzivocavoca umzimba. Izidakamizwa ze-antidiabetic, njengemithi yokwelapha efana ne-metformin noma i-non-insulin injectables, ingangezwa uma imigomo yezinga le-glucose yegazi ingafinyelelwa. Ngoba isifo sikashukela soHlobo 2 yisifo esiqhubekela phambili, kwesinye isikhathi ukukhiqizwa kwe-insulin kumanyikwe kungahle kunganeli futhi kungadingeka imijovo ye-insulin.
OKUSHIWO: Ungakwazi yini ukuguqula isifo sikashukela?
Abesifazane abakhulelwe abanesifo sikashukela sokukhulelwa
Isifo sikashukela sokukhulelwa sisho isifo sikashukela esitholakala ngesikhathi sokukhulelwa kowesifazane. Ngokufana nohlobo 2 sikashukela, i-insulin ekhona kungenzeka inganeli ukugcina amazinga ejwayelekile eglucose yegazi futhi iqinisekise ukuthi amaseli athola uphethiloli awudingayo. Imvamisa imijovo ye-insulin iyadingeka ngesikhathi sokukhulelwa ukuvikela impilo yomama neyengane.
Izingane nentsha enesifo sikashukela soHlobo 1 zincike ekwelashweni nge-insulin ukuze ziphile. I- I-International Society Yesifo Sikashukela Sezingane Nezingane (I-ISPAD) incoma ukuthi wonke amaqembu obudala, kufaka phakathi izingane, anikezwe ukwelashwa kwe-insulin okunikela ngokusondelene namazinga ejwayelekile kashukela kashukela ngangokunokwenzeka.
iyini ivithamini engcono kakhulu yokungasebenzi kahle kwe-erectile?
OKUSHIWO: Ingane yakho itholwe ukuthi inesifo sikashukela soHlobo 1. Yini elandelayo?
Ingabe ama-insulins aphephile?
Ingozi enkulu kakhulu yokuthatha i-insulin ushukela wegazi ophansi, noma i-hypoglycemia. Uma ingalashwa, ushukela ophansi wegazi ungaba yisimo esiphuthumayo kwezokwelapha. Ushukela wegazi ophansi uvame ukwelashwa ngokushesha ngokuphuza noma ngokudla ukudla okunoshukela omningi (isb., Ijusi lewolintshi noma uswidi). Kukhona nemikhiqizo, njengamaphilisi e-glucose noma i-glucagon yomjovo, abahlinzeki bezokunakekelwa kwempilo abangancoma ukuthi abasebenzisi be-insulin babe nayo. Ezinye izingozi ezinkulu ngokuthatha i-insulin ukusabela kwe-hypersensitivity (severe allergic) kanye hypokalemia (amazinga aphansi we-potassium egazi).
Ungayisebenzisi i-insulin uma:
Yiba ne-hypoglycemia (ushukela ophansi wegazi).
Yiba ne-hypersensitivities (i-allergies) kunoma iziphi izithako.
Ungayithatha i-insulin ngenkathi ukhulelwe noma uncelisa?
Yize ingekho i-insulin evunyelwe ngokusemthethweni yi-FDA ukuthi isetshenziswe ngesikhathi sokukhulelwa, ngokuvamile kubhekwa njengokuvikelekile nokusebenza ngempumelelo kwabesifazane abakhulelwe;i-insulin umuthi wendabuko ongakhetha kuqala ekwelapheni isifo sikashukela sokukhulelwa.
I-insulin ingasetshenziswa ngenkathi uncelisa.
Ingabe ama-insulins alawulwa yizinto?
Ama-insulins awazona izinto ezilawulwayo.
Imiphumela emibi ejwayelekile ye-insulin
Esikhathini sakamuva ucwaningo , I-SingleCare ithole ukuthi imiphumela emibi yamathumbu, ukungafuni ukudla, nomchamo omnyama kwakuyimiphumela emibi kakhulu ebikiwe ye-insulin.
Ukuphendula kwesayithi lokujova (ububomvu, ukuvuvukala, noma ukulunywa)
Injection site lipodystrophy (ukuqina kwesikhumba noma imigodi esizeni)
I-Myalgia (ubuhlungu bemisipha)
Ukutheleleka okuphezulu okuphefumula
I-peripheral edema (ukuvuvukala kwemilenze ephansi noma izandla)
Ukusabela kwe-Hypersensitivity (ukusabela okweqile)
Ukusabela okunamandla (kungadinga ukufuna usizo lwezokwelapha)
I-Hypokalemia (amazinga aphansi e-potassium egazi)
I-Anaphylaxis (ukusabela okweqile okunesifo esidinga usizo lwezokwelapha ngokushesha)
Kubiza malini ama-insulins?
I- izindleko ze-insulin zingahluka kakhulu ngokususelwa ohlotsheni olusetshenzisiwe (isb. i-insulin yomuntu ngokuvamile ayibizi kakhulu kunezi-insulin ezifana ne-Humalog noma i-Lantus), futhi indlela yokulethwa (isb., izitsha ngokuvamile zibiza kancane kunenani elifanayo le-insulin ezibayeni ze-insulin ezifakiwe. Izindleko ze-insulini nazo zingahluka ngokuya ngohlobo lomshuwalense, ngoba izinhlelo eziningi zisebenzisa amafomula angahle athengise imikhiqizo efanayo ye-insulin ngokuhlukile kuya ngomhlinzeki omthandayo (isb., IHumulin N ingabiza amanani aphezulu kunoNovolin N uma uNovo Nordisk kungumphakeli okhethwayo) . Kubantu abangenawo umshuwalense wezempilo, i-insulin ingabiza noma yikuphi kusuka ku- $ 25 kuye ku- $ 300 nge-vial ngayinye. Iziguli ezingaphansi komshwalense noma ezingakaqinisekisiwe zingasebenzisa amakhuphoni amahhala e-SingleCare ukonga imali kwi-insulin futhi ezinye izidingo zikashukela .
Yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zamaphilisi?
Okungcono Kokuphumula: Izindaba zakho eziyintandokazi zasekhemisi
wazi kanjani ukuthi uhlelo b b iphilisi luyasebenza
ningathatha i-wellbutrin ne-zoloft ndawonye
ingu-1000 mg we-ibuprofen kakhulu
i-sanitizer yesandla isalungile ngemuva kokuphelelwa yisikhathi
ungawanciphisa kanjani amafutha omuthi wetiye wesifo semvubelo